Accueil > Gazetin'ny nosy > Ady amin’ny tsy maty manota : Tsy laharampamehan’ny depiote
Ady amin’ny tsy maty manota : Tsy laharampamehan’ny depiote
Iray volana sisa dia hifarana ny fivoriana ara-potoanana faharoan’ny parlemanta roa tonta. Raha mijery ny lahadinika eo anivon’ny Antenimierampirenena, dia tsy mbola ho dinihana amin’ity fotoam-pivoriana ity mihintsy ny momba ireo fitoriana mpitondra fanjakana tany aloha voarain’ny fitsarana avo (haute cour de justice). Tsara ny mampatsiahy fa efa tamin’ny fivorianan’ny parlemanta tamin’ny taon-dasa tahaka izao no naroso teo anivon’ny Antenimierampirenena ireo fitoriana mpitondra fanjakana ireo fa noho ny antony tsy mazava dia najanona fotsiny tsotra izao ny fandinihana izany. Marihana ihany fa raha ny voalazan’ny lalàmpanorenan’ny repoblika faha-4, tsy maintsy ny depiote no manome alàlana vao azo henjehina sy tsaraina ireo mpitondra voatory eo anivon’ny fitsarana avo.
Miharihary toy ny vay an-kandrina ankehitriny fa tsy laharampamehan’iro solombavambahoaka mihintsy ny hiady amin’ny tsy maty manota eto amin’ny firenena. Raha tena manam-piniavana ny hiady amin’izany ny depiote, efa tamin’ny taon-dasa ihany dia efa nankatoavin’izy ireo ny fanenjehana ireo mpitondra fanjakana rehetra manana atontan-taratasy eo anivon’ny fitsarana avo izay miisa 11 raha ny fantatra. Tsy fantatra moa hatreto ny tena antony mahatonga izany fihetsiky ny solombavambahoaka izany fa ny azo antoka aloha dia mety ho nahazo vola tamin’ireo manana atontan-taratasy eo anivon’ny HCJ ireo depiote na tsy laharampamehana ho azy ireo mihintsy ny ady amin’ny tsy maty manota eto amin’ny firenena, araka ny fampanantenana nataon’ny filoham-pirenena tamin’ny fotoana nahatongavany teo amin’ny fitondrana. Tsy mahagaga ihany izany satria maro amin’ireo depioten’i Mada-
gasikara ireo no fantatra fa mpanao afera sy kolikoly avokoa. Rehefa ny mpanao hala-botry no tratra manao ny ataony dia hiharan’ny fitsaram-bahoaka na migadra eny Antanimora, fa rehefa ny mpitondra no nangalatra volam-bahoaka amina miliara dia tsy voakitikitika mihintsy.